musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Zvinotyisa? Air India A320 Flight from Delhi to Kabul
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Air India A320 ichienda kuKabul kuDelhi
Ndege yeIndia Ndege 243 neSvondo, yakashanda neAirbus 320, yanga iri mundege yakamisikidzwa kubva kuDelhi, India, kuenda kuguta guru reAfghan reKabul. Nepo iyi nendege yenhengo yeStar Alliance yaive munzira uye munzira, Kabul yakatorwa nevarwi veTaliban.
“Airspace pamusoro peAfghanistan inonzi yakavharwa, saka hapana ndege inogona kushanda ipapo. Kubhururuka kwatakaita kuKabul hakugonewo kuenda, ”akadaro mutauriri weAir India.
Nezuro, Air India Flight 243 kubva kuDelhi kuenda kuKabul nenguva dza8: 50 am India nguva yakanonoka zvishoma payakasiya nevatakuri makumi mana veAfghan paAirbus A40.
Iyi 2-awa, maminetsi mashanu kuenda kuA Afghanistan. Mushure mekuyambuka muganho paAI 5 muna Nyamavhuvhu 243 uye nzira yacho yaitarisirwa kutanga, ndege yeAir India yakarairwa kuti ibate uye kutenderera pamamita 15 kukwira kwemamwe maminetsi makumi mapfumbamwe isati yatenderwa kumhara.
Kumhara kunogona dzimwe nguva kunonoka nekuda kwekushomeka kwemhepo kutaurirana muAfghanistan airspace.
Sezvo maIndia vakapemberera Zuva reRusununguko musi weSvondo, Nyamavhuvhu 15, maTaliban aive kugadzira nyonganiso uye kutya mukutora Kabul, guta guru reAfghanistan.
Vanhu veKabul vakasara vachivhunduka sezvo nhau dzakabuda kuti maTaliban akakomberedza guta musi iwoyo. Hurumende yeAfghan yakanga ichitiza nyika, uye iro guta pacharo raive nenyonganyonga.
Air India 243, a Star Alliance ndege yaishandiswa neAir India, yanga yakatakura vashandi 6 uye vafambi makumi mana kubva kuDelhi kuenda kuKabul vasingazive kana vachizobvumidzwa kumhara kunyangwe vasvika kuKabul airspace. Ndege yakanzi itenderedze denga pasina chikonzero chiri pachena.
Kwemaminetsi makumi mapfumbamwe anotevera, Air India yakatenderedza denga pakukwirira kwemamita zviuru gumi nezvitanhatu. Ndege yeAir India yainge yaenda neimwe peturu jet. Mutyairi ane ruzivo aiziva kuti panogona kunge paine kunonoka kumhara nekuda kwekushomeka kwekutaurirana kwendege muKabul airspace dzimwe nguva.
Kunge ndege yeIndia, dzimwe ndege mbiri dzekune dzimwe nyika dzaibhururuka pasina mvumo yekumhara. Kuwedzera kune maTaliban anotora guta, kushandisa ndege pamusoro peKabul iri dambudziko.
Kabul airport inowanzo "kubatikana uye kunetesa" vatyairi vanoti. Munguva ino yegore, kubhururuka uchipinda muguta kunounza rimwe dambudziko: mhepo dzakasimba uye dzakasimba.
Ndege inokwana zvigaro zana nemakumi matanhatu yakaedzwa naCaptain Aditya Chopra.
Mvumo yakazopihwa kuma3: 30pm nguva yemuno yekuti ndege imire.
Vatakuri nevashandi havana kuziva, zvisinei, kuti mamiriro ezvematongerwo enyika muKabul aive achishata. Kunyangwe mushure mekumhara kwendege, hapana mumwe wevashandi akasiya jongwe, iro rinowanzoitika muKabul. Mushure mekumirira kweinenge awa nehafu, ndege yeAir India yakakwira vanhu gumi nevaviri ndokuenda kuDelhi zvakare.
Ndege iyi yanga yakatakura vashandi vekumiriri veIndia, vakuru vehurumende yeAfghan, vangangoita vaviri vamiriri veAfghan, uye chipangamazano mukuru kune vaimbove Mutungamiri Ashraf Ghani.
Mumwe mufambi akati aigona kuona vanhu panhandare yendege yeKabul vakapererwa vachiedza kuenda.
NeMuvhuro, Air India yaive nendege yakarongwa yeKabul kubva kuDelhi pa8: 50am. Yakatanga kunonoka kusvika na12: 50 pm uye yakazomiswa zvichitevera kuvharwa kwenzvimbo yemhepo muAfghanistan mushure mekunge NOTAM - Cherechedzo kuAirmen, chiziviso chepamutemo chine ruzivo rwekufamba nendege, chakapihwa.
Vamwe vafambi mundege vakarondedzera kuti vaigona "kunzwa kushushikana kuri pasi," asi hazvina kujeka kuti zvaive zvei.
Paive nemasoja achikwenenzvera kumaraini. Ikoko kwaive zvakare nekutinhira kwezvemhepo zviitiko: C-17 Globemaster mauto ekufambisa ndege uye Chinook helikopta vaibhururuka mukati nekubuda.
Uye vakaona ndege dzisiri dzehurumende dzePakistan (PIA) neQatar Airways dzakamiswa patara.
Iyi, pamwe, imwe yemifananidzo inosuruvarisa yandakaona kubva #Afuganisitani. Vanhu vakapererwa uye vakasiyiwa. Hapana masangano anobatsira, hapana UN, hapana hurumende. Hapana. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR